Avotra ireo vola tamin’ny sakaosy: naratra voatifitra ilay saika hanao “versement” tao amin’ny banky | NewsMada
Par Taratra sur 19/03/2019
Teo am-pidirana ny banky Bni, Andranonahoatra, saika hanao « versement » ity lehilahy iray no notafihan’ny jiolahy roa efa nanaraka azy tamin’ny môtô scooter. Nirefotra ny basy. Avotra ihany ireo vola tao anaty sakaosy. Ilay lehilahy nitondra izany kosa naratra voatifitra teo amin’ny sandriny, raha tafaporitsaka ireo jiolahy.
Notafihin-jiolahy nandeha moto ny olona iray handeha hanatitra vola tao amin’ny banky eny Andranonahoatra, omaly maraina. Saika hisintona ny sakaosy teny an-tanany ireo jiolahy, saingy nanohitra io ary niezaka nitsoaka niditra tanaty banky. Nitifitra avy hatrany ireo jiolahy ka voa teo amin’ny sandriny ilay saika horobaina. Na izany aza, tsy azon’ireo jiolahy ny vola tamin’ny sakaosy fa tafatsofoka tao anatin’ny banky ity notafihina. Niditra an-tsehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana raha vao nahita ity toe-javatra ity ka nitsoaka ireo jiolahy. Nandeha moto ireo ka tafatsoriaka tao anatin’ny fotoana fohy. Tsy tratra ireo olon-dratsy, araka izany.
Nentina tany amin’ny hopitaly Itaosy ilay voatifitra ary nafindra eny amin’ny HJRA.
Tonga teny an-toerana ny polisy sy ny zandary ary nanao ny famotorana avy hatrany. Nametrahana polisy avokoa ny banky maromaro eto an-dRenivohitra sy ny manodidina io hariva io. Nisy ihany koa ny fisafoana sy ny fisavana nataon’ny mpitandro filaminana nanerana ny lalana nahiahina fa mety ho nandehanan’ireo jioalahy.
Saika hisy hanafika teo Ampasika
Saika hisy hanafika ihany koa ny tobin-dasantsy iray eny Ampasika, omaly maraina ihany. Efa nisy mpitandro filaminana teny an-toerana ka vetivety ny nidiran’ireo an-tsehatra. Nisy ny voasambotra tamin’izany, ary tafatsoaka kosa ny sasany. Mandeha ny famotorana ary manao ny fikarohana ny mpitandro filaminana.
Ahina fa mety andian-jiolahy iray ihany ireo nanafika teny Andranonahoatra sy teny Ampasika ireo. Heverina fa misy ihany koa ny mpiray tsikombakomba satria matoa nahafantatra ireo jiolahy fa nisy vola tany amin’ilay handeha any amin’ny banky, nisy nanome vaovao azy ireo. Misokatra ny famotorana ka heverina fa hisy vokany izany.